China Auto ụgbọ ala ikuku conditioner nọ n'ọrụ carbon HEPA ụlọ nyo maka ụgbọ ala ikuku nyo factory na-emepụta | Chuangqi
Ihe nzacha ikuku
PP Air Nzacha
Pu Air Nzacha
Ihe nzacha ikuku nke gburugburu ebe obibi
Radial Cyclone Ikuku Nzacha
Airlọ ikuku Myọcha
Ọrụ Myọcha Carbon Air
Igwe okpomọkụ ahụ sooks
Auto ụgbọ ala ikuku conditioner ifịk ifịk carbon HEPA ụlọ fi ...
Silicone roba sooks, ntụ oyi roba sooks
China Manufacturer Price Auto Engine Car Oil Myọcha ...
Factory N'ogbe High arụmọrụ Air Myọcha
Auto ụgbọ ala ikuku conditioner nọ n'ọrụ carbon HEPA ulo nyo maka ụgbọ ala ikuku iyo
1. AKWA Ogo & Nkwado: site na Ọkachamara ỌR Professional; Nkwado ndị ọkachamara ọkachamara; ma ọ bụrụ na ị na-adịghị afọ ojuju, nwere ike laghachi enweghị ihe ize ndụ; Akwa arụmọrụ ikuku nyo
2. ỌR:: Nchọgharị ikuku dị ọcha na-eme ka ikuku ikuku dị elu ma gbochie unyi na uzuzu
3. IKỌR： ： biko lelee ihe nlereanya na afọ site na foto ndị ahụ, Ọ bụrụ na ị maghị ma ọ bụrụ na nke a bụ ihe ziri ezi maka ụgbọ ala gị biko zitere anyị nọmba gị niile ma anyị ga-eji obi ụtọ lelee gị.
Aha ngwaahịa: Igwe nyocha ụlọ ikuku
Nọmba OE OEM Arụ Ọrụ 99.99%
Agba Nwa MOQ 100pcs
Nkebi Aha Air inlọ nyo Ihe nlele Dị
Ebe omumu Hebei, China Akara Conqi nzacha
Ihe onwunwe Carbon ọrụ Akwụkwọ: ISO9001
Ikeji: 5um Myọcha urughuru 0.3 micron bụ 99.99%
Ngwa: Wepụ ahụ site na ikuku na-abanye n'ụlọ ahụ.
Ngwaahia: Agba, filtration arụmọrụ, antibacterial, ọ bụla iyo chọrọ.
Mbukota nkọwa: Onye akpa polyethylene, katọn, ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
Oge Mbuga ozi: N'ime ụbọchị 15-30 mgbe nkwenye nke usoro
Atụmatụ:Mee ka gị na ezinụlọ gị pụọ na ájá, pollen na ihe ndị dị mkpa site na ịnọgide na-enwe ikuku dị ọcha n'ime ụgbọ gị. O nwekwara ike ikwe ka ikike dị elu ma na-adọta ájá dị mma, bulie ikuku ikuku na sistemụ ikuku na ikuku ikuku gị.
Layer Arụ Ọrụ Carbon: Igwe arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na-enyere aka iji ọnyà na-emerụ emerụ, anwụrụ ọkụ, na gas na-emerụ ahụ n'ụzọ dị irè, melite arụmọrụ HVAC, belata ísì ọjọọ nke ụgbọ ala ma hụ na ikuku ị na-eku ume ọhụrụ.
Kwadoro:Advised na-gwara ịgbanwe gị ulo ikuku nyo kwa afọ ma ọ bụ ọ bụla 12,000 kilomita. Should kwesịrị ịgbanwe ya kwa 5,000 kilomita mgbe ịkwọ ụgbọala na kpamkpam mmeru ebe ma ọ bụ na-eme njem na unyi ụzọ.
Mfe iji wụnye:Ọ bụ ihe zuru oke zuru oke ma were ihe na-erughị 10 mins iji mezue mgbanwe nza. Ihe dị mfe ịgụ akụ ikuku na n'akụkụ na-eme ka ọ dị mfe ịwụnye.
MARA: Youkwesịrị ịpị n'afọ na ihe atụ nke ụgbọ ala ị nwere tupu ị nye iwu ka akụkụ ahụ mara ma ọ dabara n'ụgbọala gị.
Ejiri otu unyi na-arụ ọrụ na-arụ n'ime ihe nzacha ahụ na-ewepụ ájá na ihe siri ike, na-ejide ha nke ọma site na ime ụgbọ ala ebe ha na-enweghị ike iku ume. Na mgbakwunye, gosipụtara teknụzụ nyocha dị elu iji hụ na ahụike dị n'ime ụgbọ ala.
Nsonaazụ bụ ikuku ụlọ nke na-adị ọhụrụ, nwee obi ụtọ ma dị mma iku ume.
Ọ na-eme ka ụgbọ gị dị ọcha ma hụkwa ebe nchekwa ụgbọ ala dị mma.
Lelee maka nhọta ikuku nha ma ọ bụrụ na isi ísì ọjọọ na-esi na sistemụ ikuku ụgbọ ala ahụ.
Lelee maka ikuku nyo nnọchi ma ọ bụrụ na ugbo ala Heating, ventilashion na Air Conditioning (HVAC) System egosiputa ogbenye arụmọrụ ma ọ bụ arụmọrụ.
1. OEM Manufacturing welcome: Ngwaahịa, ngwugwu
2. Ihe nlele
3. Anyị ga-aza gị maka ajụjụ gị na 24 awa.
4. mgbe eziga, anyị ga-esoro gị ngwaahịa maka otu ugboro kwa ụbọchị abụọ, rue mgbe ị nwetara ngwaahịa. Mgbe ị nwetara ngwongwo, nwalee ha, ma nye m nzaghachi. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla
Nke gara aga: 88568-0D520 ikuku conditioner mgbochi ájá nyo na-abụghị kpara ụgbọ ala ikuku keonodu nyo
Osote: N'ogbe enginge akụkụ atụ ogho na mmanụ iyo 26300-02503 maka Hyundai ụgbọ ala
2004 Toyota Corolla Airlọ ikuku nyocha
Inlọ Ikuku Mgbaaka ụgbọ ala maka igwe ndozi 80292s6d
Inlọ Air Myọcha Cleaner
Carbon arụ ọrụ Cabin Air Myọcha Media
Ọrụ Carbon Air Myọcha 87139-0N010
Okwu: No.108 Zhongshan Road, Qiaoxi District, Shijiazhuang City, China